खाडी क्षेत्रमा किन पठाउँदैछ अमेरिकाले सेना ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more खाडी क्षेत्रमा किन पठाउँदैछ अमेरिकाले सेना ?
खाडी क्षेत्रमा किन पठाउँदैछ अमेरिकाले सेना ?
अशोज ४ गते, २०७६ - २१:२४
ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको केन्द्रीय बैंकमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेका छन् । इरानमाथि तत्कालै सैन्य कारबाही गर्ने योजना नभए पनि अर्को मुलुक विरुद्ध यो सबैभन्दा ठूलो कारबाही हो ।
तर अमेरिकी संयुक्त सैन्य प्रमुख जो डन्फोर्डले खाडी क्षेत्रमा पठाइने सैनिक संख्या एक हजारको हाराहारीमा मात्र रहने स्पष्ट पारे । कतिपयले राष्ट्रपति ट्रम्पले इरान विरुद्ध युद्ध नै शुरु गर्ने अनुमान गरे पनि अमेरिकी नीति एकाएक फेरिएको थियो ।
अशोज ४ गते, २०७६ - २१:२४ मा प्रकाशित